नेपालमा कोरोनाबाट पहिलोपटक यस्ता व्यक्तिकाे मृत्यु, जसकारण स्तब्ध बन्याे सिंगाे अस्पताल — Imandarmedia.com
मोरङ । मोरङमा कोरोना संक्रमणका कारण आइतबार राति र सोमबार बिहान चार जनाको मृत्यु भएको छ। पथरीमा सञ्चालित मोरङ हस्पिटल प्रालिका सञ्चालकसहित चार जनाको मृत्यु भएको हो। पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मुरारी आचार्यका अनुसार मृतकलाई पिसिआर परीक्षण गराउँदा असोज २२ गते रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो।
उनको न्युरो अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो। पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–१ का ५३ वर्षीय उनको बिहान ३ बजे मृत्यु भएको अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत सुरेश आचार्यले बताए। रिपोर्ट आउनुभन्दा पहिले नै उनलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या भएको थियो। उनको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको थियो।
नेपालमा हस्पिटल संचालकको कोरोनाबाटै ज्यान गएको यो पहिलो घटना हो । यस्तै, ग्रामथान गाउँपालिका–४ का ६६ वर्षीय वृद्ध पुरूषको नोबेल शिक्षण अस्पतालमा सोमबार बिहान मृत्यु भएको छ। कोभिड अस्पतालको आइसोलेसनमा बिहान ९ बजेतिर उनको वृद्धको मृत्यु भएको हो।
यस्तै चितवन मेडिकल कलेज (सीएमसी)मा उपचाररत एक जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । भरतपुर महानगरपालिका–१० का ७६ वर्षीय पुरुषको आज बिहान ४ बजे मृत्यु भएको सीएमसीका निर्देशक डा. दयाराम लम्सालले जानकारी दिए ।
ज्वरो, खोकी र श्वासप्रश्वासको समस्या भएपछि उनलाई गत असोज २० गते अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उच्च रक्तचाप, प्रोस्टेट र थाइराइडबाट पनि पीडित ती पुरुषमा असोज २० गते नै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उपचारमा अथक प्रयास गर्दागर्दै आज बिहान उनको मृत्यु भएको डा. लम्सालले बताए ।
यसैबीच चितवनमा बडा दसैँको बेलामा कोरोना परीक्षणको कामलाई नरोक्ने गरी तयारी गरिएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय चितवनमा आइतबार बसेको जिल्लास्तरीय संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले दसैँको मुख्य तीन दिन अष्टमी, नवमी र दशमीमा आलोपालो ल्याबहरु खोलेर कोरोना परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दीपकबाबु तिवारीले दिएको जानकारी अनुसार अष्टमीको दिनमा भरतपुर अस्पतालको कोभिड १९ प्रयोगशाला, नवमीको दिन चितवन मेडिकल कलेजको प्रयोगशाला र दसैँको टीकाको दिन क्यान्सर अस्पतालको प्रयोगशाला सञ्चालन गरिने छ । चितवनमा तीनवटा अस्पतालले कोरोना परीक्षण गराउँदै आएका छन् ।
साथै बैठकले दसैँको बेलामा सबै स्थानीय तहमा स्टाण्डबाई रहने एम्बुलेन्सहरूको सूचीसमेत सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको तिवारीले बताए । अस्पतालहरुमा हाल चलिरहेका कुनै पनि सेवालाई नरोक्ने गरी जनशक्तिको विन्यास र व्यवस्थापन गर्न अस्पतालहरूलाई भनिएको छ । ‘विदामा बस्दै नबस्नुस् भन्नुभन्दा पनि कुनै पनि सेवा नरोकिने हिसाबले व्यवस्थापन गर्न अस्पतालहरूलाई बैठकले भनेको छ,’ स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख तिवारीले भने, ‘कोभिडको बेलामा सबै संवेदनशील बन्नुपर्ने नै छ ।’
तिवारीले दसैँको बेलामा जमघट हुने भएकाले सावधानी अपनाउन सबैलाई अनुरोध गरे । टीका लगाउँदा बाहिर घाम भएको र हावा खेल्ने ठाउँमा लगाइदिन उनले सुझाव दिए । साथै टीका लगाउने र लगाइदिने दुवैले मास्क लगाउनु पर्ने पनि उनले बताए । चितवनमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या ३ हजार २ सय ३४ पुगेको छ । हालसम्म ४१ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।
कोरोना भाइरस नेपाल: नेपालमा वास्तविक मृतकको सङ्ख्या कति? यसो भन्छन् अधिकारीहरू ? बीबीसीकाे एक रिपाेर्ट:
नेपाली सेना र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको मृत्यु विवरणमा मृतकको सङ्ख्या फरक-फरक देखिएपछि कतिपयले “नेपालमा मृतकको सङ्ख्या लुकाइएको हुनसक्ने” भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। त्यसबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यमले स्वास्थ्य मन्त्रालयतर्फ औँला सोझ्याएका छन् भने सामाजिक सञ्जालमा पनि कतिपयल मन्त्रालयको विवरणमा अविश्वास व्यक्त गरेका छन्।
बीबीसीले कुराकानी गरेका स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाली सेनाका अधिकारीले चाहिँ “के कारणले विवरण फरक परेको हो भन्ने पत्ता लगाउने काम” जारी रहेको बताए। उनीहरूका अनुसार कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले पनि यसबारे चासो देखाएर “विवरणहरूको पुन: रुजु गर्न थालेको” छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गत शुक्रवारसम्म नेपालमा कोभिड-१९ का कारण कुल ७१५ जनाको निधन भएको जानकारी दिएको थियो। त्यसैदिन नेपाली सेनाले चाहिँ कोभिड-१९ बाट निधन भएका कुल ८८९ जनाको शव व्यवस्थापन गरेको विवरण सार्वजनिक गर्‍यो।
नेपालमा कोरोनाभाइरस भित्रिएदेखि नै मृतकहरूको शव व्यवस्थापन नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ। मृतकहरूको धार्मिक आस्थाका आधारमा सेनाले शव व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ। उसले सार्वजनिक गरेको विवरणमा विभिन्न पृतना अन्तर्गत कतिवटा शव व्यवस्थापन भयो भन्ने पनि उल्लेख छ।
त्यसपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यमका साथै सामाजिक सञ्जालमा पनि मानिसहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरणप्रति शङ्का व्यक्त गर्न थालेका हुन्। शुक्रवार एकैदिन दुवै निकायले सार्वजनिक गरेको विवरणमा मृतकको सङ्ख्या १७४ जना फरक परेकाले त्यसले कतिपयले “स्वास्थ्य मन्त्रालयले मृतकको सङ्ख्या लुकाएको हो कि” भन्ने आशङ्का गरेका हुन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार शनिवारसम्म भने नेपालमा कुल मृतकको सङ्ख्या ७२७ पुगिसकेको छ। बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषवल्लभ पौडेलले “प्रत्यक्षरूपमा शव व्यवस्थापनमा संलग्न इकाइहरूले पठाएको विवरणको आधारमा” तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको बताए।
उनले सुरुदेखि नै पृतनाहरूले शव व्यवस्थापन गर्दै आएकाले उनीहरूकै विवरणलाई आधार मानिएको बताए। उनले भने, “हामीले प्रत्येक व्यक्तिको नाम, थर र बाँकी सबै चिजको आधारमा युनिटहरूमा प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा त्यो प्रकाशित गरेको हो।” “नमिलेको विषयमा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौँ। सीसीएमसीले पनि त्यसमा प्रमाणिकरण गरिरहेको छ।”
उनले सेनाको तथ्याङ्कमा कोभिड-१९ भएर आत्महत्या गरेकाहरू, बेवारिसे र मृत्यु भइसकेपछि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएकाहरूको पनि सङख्या समावेश भएको बताए। तर त्यो सङ्ख्या खासै धेरै नभएको पौडेलको भनाइ छ।
उनका अनुसार तथ्याङ्कमा फरक परेको विषयमा आइतवार पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सीसीमएसीसहित छलफल भएको थियो। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पनि मन्त्रालयले उक्त विवरणबारे रुजू गर्ने काम थालिएको बताए।
उनले बीबीसीसँग भने, “उहाँहरूले कसरी निकाल्नु भएको रहेछ हामी हेर्दै छौँ।” “अब कोरोनाको गर्नुभयो कि अरूको गर्नुभयो हिसाब गर्नुपर्‍यो नि! त्यो भेरिफाइ गर्दैछ मन्त्रालयले।”